हाइड्रोपोनिक्स सुविधाहरू, उपयोग, र लाभहरू | हरियो नवीकरणीय
त्यहाँ कृषि माटो, बगैचा, र भाँडाहरू बाहेक बोट बिरुवा उमार्ने वैकल्पिक तरिकाहरू छन्। यो हाइड्रोपोनिक बालीहरूको बारेमा हो।
1 हाइड्रोपोनिक्स भनेको के हो?
2 हाइड्रोपोनिक्स सुविधाहरू
3 हाइड्रोपोनिक्सले प्रयोग गर्दछ
4 वर्गीकरण र हाइड्रोपोनिक्स द्वारा प्रस्तुत फाइदाहरू
5 कन्टेनरहरूको प्रयोग
हाइड्रोपोनिक्स भनेको के हो?
हाइड्रोपोनिक्स एक विधि हो जुन माटो प्रयोगको सट्टा बढ्दो बिरुवाहरूको लागि समाधानको प्रयोग समावेश गर्दछ। यस प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् र यो धेरै उपयोगी छ। के तपाई हाइड्रोपोनिक्सको बारेमा सबै जान्न चाहानुहुन्छ?
जब हामी रोप्नका लागि यो प्रविधी प्रयोग गर्दछौं, जराले बढ्नको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्वहरू र पानीमा घुलिएको सन्तुलित सघनताको भरिपूर्ण समाधान प्राप्त गर्दछ। थप रूपमा, यस समाधानमा बोटको राम्रो विकासको लागि सबै आवश्यक रासायनिक तत्वहरू हुन्छन्। यसैले, बोट खनिज समाधानमा मात्र बढ्न सक्छ, वा inert मध्यम मा, जस्तै बजरी, मोती वा बालुवा।
यो प्रविधी १ th औं शताब्दीमा पत्ता लागेको थियो जब वैज्ञानिकहरूले देखे कि खनिजहरू पानीमा घुलिएका अजैविक आयनहरूको माध्यमबाट बोटबिरुवाहरू लिन्छन्। प्राकृतिक अवस्थामा, माटोले खनिज पोषक तत्वहरूको सञ्चयको रूपमा काम गर्दछ, तर माटोमा नै बोट बढ्नको लागि आवश्यक छैन। जब माटोमा खनिज पोषकहरू पानीमा घुलिन्छन्, बोटको जराले तिनीहरूलाई अवशोषित गर्न सक्षम हुन्छ।
किनभने बोटबिरुवाले समाधानमा पौष्टिक तत्वहरू सामेल गर्न सक्षम छन्, बोटको विकास र बढ्नको लागि सब्सट्रेट आवश्यक हुँदैन। लगभग कुनै पनि बोट हाइड्रोपोनिक टेक्निकको प्रयोग गरेर बढ्न सकिन्छ, यद्यपि त्यहाँ केहि छन् जुन अरु भन्दा अरु सजीलो र राम्रो परिणामहरु छन्।
हाइड्रोपोनिक्सले प्रयोग गर्दछ
आज, यो गतिविधि मुलुकमा ठूलो बृद्धिमा पुगेको छ जहाँ कृषिको अवस्था प्रतिकूल छ। राम्रो ग्रीन हाउस प्रबन्धनको साथ हाइड्रोपोनिक्सको संयोजन गरेर, उत्पादन खुला हावा बालीमा भन्दा धेरै बढी हुन्छ।
यस तरिकाले, हामी तरकारीहरू द्रुत रूपमा बढ्न र पौष्टिक समृद्ध खाना प्रदान गर्न सक्दछौं। हाइड्रोपोनिक्स प्रविधि यो सरल, सफा र सस्तो छ, त्यसैले सानो-स्तर कृषिको लागि, यो धेरै आकर्षक स्रोत हो।
यसले व्यावसायिक मापदण्ड पनि हासिल गरेको छ र केहि खानाहरू, आभूषण र युवा सुर्तीजन्य बोटहरू यस किसिमले विभिन्न कारणहरूको लागि उब्जनी गरिन्छ कि पर्याप्त माटोको अभावसँग सम्बन्धित छ।
आज त्यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन् जुन माटोलाई फैलिएको वा सूक्ष्मजीवहरूले दूषित रोगहरूको कारण वा भूजल प्रयोग गरेर दूषित हुन्छ जुन जमिनको गुणस्तर बिगार्न सक्छ। यसैले, हाइड्रोपोनिक खेती दूषित क्षेत्रको समस्याहरूको समाधान हो।
जब हामी माटोलाई हुर्कनको लागि स्थानको रूपमा प्रयोग गर्दैनौं, हामीसँग कृषि माटोले प्रदान गर्ने बफरि effect प्रभाव हुँदैन। यद्यपि तिनीहरूको जराको अक्सिजनेशनको साथ विभिन्न समस्याहरू छन् र यो त्यस्तो चीज होइन जुन व्यापारिक तराजुमा सफा भन्न सकिन्छ।
त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले हाइड्रोपोनिक्स प्रयोग गर्छन्। मनोरन्जन र अनुसन्धान गर्न चाहने खाली समय भएका व्यक्तिहरू, अनुसन्धानको लागि, विद्यार्थीहरूलाई केही रसायनिक तत्त्वहरूको आवश्यकताको बारेमा प्रदर्शन गर्न, तिनीहरू जो कन्टेनर वा सानो टबमा बढ्न चाहान्छन्, स्पेसशीपमा वा ठूलो मात्रामा बढ्नको लागि खेती।
वर्गीकरण र हाइड्रोपोनिक्स द्वारा प्रस्तुत फाइदाहरू
हाइड्रोपोनिक बालीहरू हालसालै यसको प्रयोगका मार्गहरू र वातावरणीय प्रभावको कारणले विकसित भएको छ। एकातिर, हामी फारामहरू फेला पार्दछौं खोल्नुहोस्, जो ती हुन् जो फोहोर फाल्छन्, र अर्कोतर्फ, हामीसँग छ बन्द भएकाहरू, जसले पोषक समाधानलाई पुन: उपयोग वातावरण संरक्षण र यसको प्रयोगमा अधिक अर्थव्यवस्थाको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
हाइड्रोपोनिक्सले परम्परागत कृषि माटोले बाधा पुर्‍याउँछ। कृषि माटोलाई सब्सट्रेट, ठोस पदार्थ, जडिबुटी, मल, कीटनाशक, आदि आवश्यक हुन्छ।
हाइड्रोपोनिक्ससँग ईन्टरट सब्सट्रेट हुन सक्दछ यदि चाहिन्छ भने perlite, pumice, पीट, बजरी, आदि
हाइड्रोपोनिक प्रणालीहरू सुरुमा "खुला" प्रकारका थिए, किनकि खेतीमा प्रयोग गरिएको बहावको पानीको वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखिएको थिएन। एक पटक उनीहरूले वातावरणमा समाधानको डम्पिंगको प्रभावहरू देखे, 'बन्द' विधाहरू विकसित भए। यो विधि अन्य बालीहरूको लागि पोषकहरूको पुनः प्रयोगमा आधारित छ, वातावरणमा असर पार्ने असरहरूलाई बेवास्ता गर्दै।
हाइड्रोपोनिक्सले परम्परागत बाली भन्दा धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ:
यसले घर भित्र (बाल्कनी, टेरेसहरू, आँगन, इत्यादि) बढ्न अनुमति दिन्छ।
थोरै ठाउँ चाहिन्छ (ओभरल्यापि instal स्थापनाहरू थप ठाउँ गुणा गर्न सकिन्छ)
परम्परागत कृषिको तुलनामा खेती अवधि कम छ, किनकि जराहरू पोषक तत्वहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्, डाँठ, पात र फलफूलको असाधारण वृद्धि हासिल गर्दछन्।
यसको लागि कम श्रमको आवश्यकता छ, किनकि जमिनमा काम गर्न आवश्यक छैन (माटो हटाउने, बिरुवा रोप्ने, बाली सफा गर्ने आदि)।
परम्परागत बाली जस्तो माटोको क्षरणको कुनै समस्या छैन
मलहरू लागू गर्न आवश्यक छैन, त्यसैले उत्पादित तरकारीहरू १००% जैविक हुन्।
को तथ्य मलको आवश्यकता पर्दैन यो वातावरणीय प्रभाव को मामला मा एक ठूलो लाभ हो। हामीलाई थाहा छ, नाइट्रोजन मलको अत्यधिक प्रयोगका मुख्य कारणहरू एक हुन् पानीको eutrophication र भूजल संदूषण। मलको प्रयोग बेवास्ता गरेर हामी वातावरणमा नकरात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्दैछौं।
हालसालै, हाइड्रोपोनिक्स प्रणालीमा कन्टेनरहरूको प्रयोग प्रस्ताव गरिएको छ। "तीव्र रूपमा उच्च" उत्पादनको साथ, हाइड्रोपोनिक्समा कन्टेनरहरूको प्रयोगले सबै बढ्दो प्रणालीहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्दछ। तिनीहरूले परम्परागत कृषिमा प्रयोग गरिएको भन्दा% ०% कम पानी प्रयोग गर्नेछन्।
जब हाइड्रोपोनिक्स कन्टेनरहरूमा प्रयोग गरिन्छ, यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि पानी प्रत्येक बाह्र मिनेटमा उही ठाउँबाट बग्दछ। यस तरीकाले हामी बालीना पोर्टेबल फार्ममा परिवर्तन गर्दैछौं।
यदि हामीले हिड्रोडोनिक्सको प्रयोग गरेर हिसाब गरे, यो फसल काट्न सकिन्छ लगभग ,4.000००० देखि ,6.000००० साप्ताहिक तरकारी एकाईहरू (जुन प्रति वर्ष करीव tons० टन सम्म हुन्छ) जुन कृषिमा परम्परागत बिउ रोप्ने र फसल प्रणाली प्रयोग गरेर उही ठाउँमा प्राप्त हुने एकाइहरूको संख्याको times० गुणा बराबर हो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हाइड्रोपोनिक्स एक बढ्दो व्यापक टेक्निक हो, किनकि यसलाई कृषि जग्गाको आवश्यकता पर्दैन र स्रोत र ठाउँलाई अनुकूलन गर्दछ। यदि हामीले हाइड्रोपोनिक्स विस्तार गर्‍यौं भने, हामी कृषि माटोमा ब्रेक दिनेछौं जुन प्रदुषण घटाउन योगदान पुर्‍याउँदै अत्यधिक मल, हलो, जडिबुटी र अन्य रसायनहरूको प्रयोगमा ल्याइएको दबाबमा पर्दछ।
हाइड्रोपोनिक बालीहरू, तिनीहरू के हुन् र घरमा कसरी बनाउने
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » हाइड्रोपोनिक्स
मलाई जान्न रुचि हुन्छ कि बिरूवाहरूले कस्ता प्रकारका पोषकहरू बोक्छन् र कहाँ उनीहरू खरीद गरिन्छ।
जहाँ तपाईं वर्ग pvc ट्यूबहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ वा आरड्रिनरमा पारिवारिक प्रयोगको लागि हाइड्रोपोनिक्समा उपचार गर्न सक्षम हुन?